Breast Cancer Treatment Regimes ရင်သားကင်ဆာ ကုထုံးများ ~ လူဗိုလ်ဟူသည် ...
Breast Cancer Treatment Regimes ရင်သားကင်ဆာ ကုထုံးများ Author: lu bo | 9:33 PM | No မှတ်ချက် | Tint Swe
သိသိသာသာနည်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသက်ရှည်နှုန်း ၆ နှစ်ထက်တော့မပိုပါ။ 2. Breast cancer (Operable) ခွဲစိတ်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိတဲ့ ရင်သားကင်ဆာ
- Breast conservative surgery တစိတ်တပိုင်းခွဲစိတ်နည်း - Chemotherapy + Tamoxifen ဆေး ၂ မျိုးပေးနည်း၊
- First line chemotherapy + Monoclonal antibody (in women with over-expressed HER2 neu Oncogene) ဆေး ၂ မျိုးပေးနည်း။ (b) Hormone treatment ဟော်မုန်းပေးကုသနည်း
- Combined Gonadorelin analogues + Tamoxifen as first line treatment in
premenopausal women သွေးမဆုံးသေးသူကို ဆေး ၂ မျိုးတွဲပေးမည်း၊
- Progestin as first line treatment Vs Tamoxafen, beneficial in women with
bone pain and anorexia အရိုးနာနေသူကို ဟော်မုန်းဆေး (သို့) တခြားဆေးပေးနည်း။
၂-၁၁-၂ဝ၁၁ ရင်သားကင်ဆာ ဆေးကုသနည်းသစ် Clinical Oncology ဆေးပညာ ဂျာနယ်ထဲမှာ Intergroup Exemestane Study's (IES)
ရဲ့ ထုတ်ချက်အရ breast cancer ရင်သားကင်ဆာကြောင့် Tamoxifen ဆေးကို ၂-၃ နှစ် ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Exemestane ခေါ်တဲ့ Aromatase inhibitor ဆေးကို ပြောင်းရင် သေဆုံးရတဲ့ဦးရေကို သိသိသာသာ လျှော့စေနိုင်တယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
Intergroup Exemestane Study ရယ် Institute of Cancer Research's Clinical Trials & Statistics Unit ရယ် Imperial College London's Clinical Trials Unit
(Cancer) ရယ် ပူးပေါင်းပြီး ရေရှည်အကျိုးဖြစ်တာကို ၃၇ နိုင်ငံမှာ ၁၉၉၈ ကတည်းက လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။ Tamoxifen ဆေးကို ၂-၃ နှစ်ပေးပြီး၊ Exemestane ဆေးကို စုစုပေါင်း ၅ နှစ်ပြည့်အောင် ပေးနည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Pfizer Inc. ကနေ ငွေကြေးထောက်ပံတဲ့ သုတေသန ဖြစ်ပါတယ်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ထုတ်ပြန်ချက်အရ အဲလို ဆေးတမျိုးထဲကနေ နောက်တမျိုးကို ပြောင်းပေးခဲ့သူ၊ နောက်ပြီး ရောဂါလဲ ၂-၃ နှစ်အထိ ရောဂါ ပြန်မဖြစ်သူတွေ ဖြစ်တဲ့ သွေးဆုံးပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာ သေဆုံးမှုနှုန်း နည်းတာသိရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကောင်းတဲ့ အလားအလာဟာ နောက်မှာလဲ
UK Cancer Research ကင်ဆာသုတေသန သတင်းပြန်ကြား ဒါရိုက်တာ Dr Lesley Walker
ပြောတာက ဒီရလဒ်တွေအရ Exemestane ဆေးဟာ ဟော်မုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရင်သားကင်ဆာ
ကုသဘို့အတွက် အပိုတန်ဘိုး ရှိပါတယ်။ Tamoxifen ဆေးပြီးသူတွေအတွက်လဲ ရှောင်ရှားနိုင်တယ်။ ဆေးကုသမှုကို တိုးတက်စေပြီး၊ သေနှုန်း နည်းစေတယ်။ Aromatase inhibitors ဖြစ်တဲ့ Exemestane လိုဆေးဟာ ရင်သားကင်ဆာကုထုံးကို ပိုမိုကောင်းစေတယ်။ ရင်သားကင်ဆာ ကာကွယ်ရေးအတွက် အားတက်စရာ ဖြစ်ပါတယ်။